GeForce Ankehitriny, milalao ny lalao ankafizinao miaraka amina ekipa tena maotina | Vaovao momba ny gadget
Nandritra ny fankalazana ny CES 2017 dia afaka nahita tolo-kevitra sy serivisy tsara maro izahay izay azo antoka fa hahaliana ny mpanatrika tena manokana. Anisan'izy ireo anio tiako horesahina GeForce Now, serivisy fandefasana lalao video tena hafahafa izay hanomboka afaka volana vitsivitsy NVIDIA amin'ny alàlan'ny alàlan'ny mpampiasa iza na iza, na inona na inona fitaovany ary manana fahefana bebe kokoa na latsaka, dia afaka milalao ny lalao farany navoaka.
Araka ny fantatrao tsara, ny filàna herinaratra sary dia tena ilaina amin'ny lalao vao navotsotra, indrindra raha tianao ny hankafy azy ireo amin'ny kalitao tsara indrindra. Ity dia zavatra tadiavintsika rehetra amin'ny lalao gamer, indrisy fa tsy isika rehetra no manana solosaina manana karatra sary tsara indrindra eny an-tsena. Amin'io fotoana io no te-hiditra ny NVIDIA miaraka amin'ny serivisy GeForce Now vaovao.
GeForce Now, milalao ny lohateny tsara indrindra eny an-tsena raha mila solosaina matanjaka be ianao.
Amin'ny ankapobeny ny zavatra atolotry ny orinasa antsika dia safidy iray ahafahantsika mifandray lavitra amin'ny mpizara azy ireo amin'izay, amin'ny alàlan'ny solosaina rehetra, afaka milalao lalao amin'ny manaraka isika. Ny teboka ratsy amin'izany rehetra izany dia ny vidin'ny serivisy heverina fa alefa amin'ny alàlan'ny solosaina tena maotina amin'ny resaka endri-javatra nefa manana fifandraisana internet tsara, azontsika atao milalaova toa anao manana GeForce 1080, ohatra.
Mikasika ny vidiny, araka ny fanamarihana nandritra ny fampisehoana ny serivisy, niresaka momba izay ho vidin'ny GeForce Now izahay $ 25 mandritra ny 10 ora filalaovana «Kalitao GTX 1080«, raha sanatria ka vonona hilalao an'ireo anaram-boninahitra ireo izahay miaraka amina kalitao somary ambany kokoa, ohatra «Kalitao GTX 1060»Ny vidiny dia $ 25 mandritra ny 20 ora filalaovana. Araka ny efa nolazaiko, ny vidiny lafo loatra ho an'ireo mpilalao manokana ora maro isan'andro ho an'ity fialamboly ity, raha ho an'ireo izay milalao amin'ny fotoanan'izy ireo sy ora vitsy isan-kerinandro fotsiny dia mety hahaliana kokoa izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Software » GeForce Now, milalao ny lalao ankafizinao amin'ny ekipa tena maotina
Afaka manampy lalao hafa amin'ny alàlan'ny USB amin'ny Nintendo Classic Mini NES ianao izao